घर र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि धुंध Humidifier
सुख्खा हावा राहत! बजारमा सबैभन्दा प्रभावकारी कूल मिस्ट ह्युमिडेफायरको लागि थप नहेर्नुहोस्! सुख्खा हावाको भयानक प्रभावबाट पीडा हटाउन चाहनुहुन्छ? सस्तो कमजोर र चुहावट डेस्क humidifiers संग संघर्ष गर्न आवश्यक छैन। यो गुणस्तर अल्ट्रासोनिक humidifier तपाईंले खोज्दै हुनुहुन्छ। यसले तुरुन्तै र प्रभावकारी रूपमा राहत पम्प गर्दछ! - मिनेटमा राम्रो महसुस गर्नुहोस्!
यो HEPA नयाँ पुस्ताको एयर प्युरिफायर एयर क्लीनर एयर प्रिट्रिटमेन्ट सिस्टमको साथमा धुवाँ, परागकण, घरको लागि डन्डर, शयनकक्ष, बैठक कोठा, भान्छा हटाउँछ।
जब फिल्टर परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, रातो सूचक सम्झाउन प्रकाश हुनेछ।
कम गति/मिडस्पीड/उच्च गति/अफ।
निद्रा मोड संग।
H13 फिल्टर संग
सुगन्ध बक्स संग
एलर्जी र घरपालुवा जनावरहरू, धुम्रपान गर्नेहरू, मोल्ड, परागकण, धुलो, शयन कक्षका लागि शान्त गन्ध हटाउनेहरूका लागि H13 ट्रु HEPA फिल्टर क्लीनर